Filoha Hery Rajaonarimampianina : “Hatao laharam-pahamehana ny fandriam-pahalemana” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina : “Hatao laharam-pahamehana ny fandriam-pahalemana”
24/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanamafy ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa hatao laharam-pahamehana ny fitandroana sy ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Ny fitondram-panjakana hoy izy dia mametraka hatrany ny fitandroana sy fiadiana ny fandriam-pahalemana ho zava-dehibe. Tafiditra ao anatin’ny foto-kevitra fisandratana 2030 izay napetrak’ity filoham-panjakana ity rahateo izany mba ahafahan’ny rehetra miaina am-pilaminana. Nambarany fa tsy ny eto an-tanàn-dehibe fotsiny no hatao lohalaharana amin’ny fametrahana izany, fa hojerena hatramin’ny tsy fandriam-pahalemana any ambanivohitra sy manerana an’i Madagasikara mihitsy. “Tsy miantefa amin’ny mpitandro filaminana irery fa miantefa amin’ny mpiandraikitra ny fandriam-pahalemana sy ny vahoaka malagasy iray manontolo izany antso izany, satria andraikitry ny rehetra ny fandriam-pahalemana. “, hoy ny fanazavan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Mba ahafahana manatanteraka izany sy ho fanampin’ny ezaka rehetra efa vita, dia nanentana ny filoham-pirenena, ny hamerenana sy ny hanamafisana indray ny endrika hitandroana ny filaminana tahaka ny andrimasom-pokonolona isam-pokontany.
Hiarahan’ny rehetra mahalala tokoa mantsy fa dia olona eny anivon’ny fokontany sy ny fiaraha-monina eny ihany no tompon’antoka amin’ny fampitondrana faisana sy ny fampihorohoroana ny vahoaka. Ilaina araka izany ny fiaraha-mientana sy ny fandraisan’andraikitry ny tsirairay avy mba hampienana sy hamongorana azy ireny. Isan’ny tafiditra ao anatin’ny politikan’ny fitondram-panjakana hatramin’izay moa ny fampandriana fahalemana ny firenena ka tsy mitarain-tana-miepaka amin’ny fitadiavam-bahaolana hiadiana amin’izany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Ankoatra ireo kaomisaria foibe efa naorina teny Itaosy, Sabotsy- Namehana, Amparafaravola, Sambava, miampy ireo borigadin’ny zandarimaria maro, ho fanampin’ireo izay efa mijoro, dia nambarany fa mbola hitohy ny ezaka sy ny fananganana fotodrafitrasa maro isan-karazany sy ny fampitaovana ireo mpitandro filaminana , ahafahana manatsara ny asan’izy ireo amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. “Hatao ahoana moa no hampisandratra ny firenena raha vahoaka mitaintaina sy miaina ao anatin’ny tsy fandriam-pahalemana no tazana eto amin’ny firenena. Tsy afaka mandeha irery ny fampandrosoana fa tsy maintsy miaraka manatanteraka izany ny rehetra”, hoy hatrany ny voalazany.
Navoaka tamin’ny fomba ofisialy omaly teny amin’ny sekoly ambonin’ny polisim-pirenena (ENSP) teny ivato ireo manamboninahitra polisy izay nampitondraina ny anarana “Andiany Mahery”. Miisa 50 mianadahy izy ireo, izay nahitana “commissaire de police” miisa 20 sy “officier de police” miisa 30, ka vehivavy ny 07 tamin’izy ireo. Nanaraka fiofanana nandritra ny roa taona ireto manamboninahitra polisy ireto, ary ankoatra ny taranja fototra izay nianarana teo anivon’ny sekoly, dia isan’ny nampiavaka ity “Andiany Mahery” ity ny fampahalalana manokana azy ireo mikasika ny fampahafantarana ny zon’olombelona izay iankinan’ny maha-tany tan-dalàna an’i Madagasikara , ny fampahafantarana ny ady amin’ny fampihorohoroana amin’ny tranonkalam-pifandraisana izay miroborobo fatratra ankehitriny, ny fahaiza-mitantana, ny fahaiza-miaina, ny tamberin’andraikitra, sy ny maro tsy ho voatanisa.”Tsy ny fisandratana eo amin’ny lafin’ny ara-toe-karena fotsiny ihany no ilain’ity firenena ity hampandroso azy, fa ny fisandratana ara-toe-tsaina, ny soatoavina amin’ny mahaolona ihany koa”, hoy ny nambaran’ny filohan’ny repoblika tao anatin’ny lahateny izay nataony omaly teny Ivato. Tamin’ny fandraisam-pitenenany kosa dia nanentana ity “andiany Mahery” ity ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, Andrianisa Mamy Jean Jacques ny hanatanterahan’izy ireo antsakany sy andavany ny asa izay hampiandraiketana azy, fa ihany koa tsy handray anjara amin’ny ady amin’ny kolikoly izay isan’ny mampimenomenona ny vahoaka.
Tanjona ny hanala ny fahasahiranan’ireo ray aman-dreny izay efa miantoka ny zanany mandavan-taonoa, na eo amin’ny sakafo andavanandro io, na ihany koa ny saran-dalana sy ny tsindry vavony ho an’ ireo mpianatra amin’ny CEG sy ...Tohiny